Home Wararka Abaaro saameeyay dad iyo duunyo oo ka jira deegaano katirsan Gobolka Jubada...
Abaaro saameeyay dad iyo duunyo oo ka jira deegaano katirsan Gobolka Jubada Hoose
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya Dowlad Gobleedka Jubbaland, deegaanno katirsan Gobolka Jubada Hoose ee DG Jubbaland waxaa ka taagan Xaalad Abaar oo saameyn ku reebtay Dadka & Duunyada, waxaa engagay (Qalalay) Ceelashada Biyaha sida Mustaqbal ay u xaqiijiyeen Dadka Deegaanka. Afmadow, Dhoobley & Kulbiyow waa saddexda goob ugu daran abaartaan, Dadka Xoolo dhaqatada ah ayaa bilaabay in ay isaga tagaan Hoygooda si ay u raadsadaan Deegaanno uga nolol wanaagsan.
Dhanka kale, dadka deegaanka waxa ay sheegeen in Ceelasha Biyaha ay engageen (Qalaleen), Xoolahana ay bilaabeen in tarab-tarab haraad ugu dhintaan, taasina ay ku sababtay in ay la baxsadaan xoolaha kooban ee u badbaaday. Abaarta ayaa dhulka ka dhigtay meel qalalalan, jir ahaan Dadka & Xoolaha ay dhaqdaan ayaa is bedelay oo waxaa laga dareemayaa heerka nololeed ay gaarsiisan yihiin sida ka muuqata sawirro laga soo qaaday tuulooyinka qaar.
Kulbiyow waxaa shaqo joojiyay ceelkii ugu dambeeyay ee Biyaha wararaha looga shubi jiray si loo siiyo Xoolaha, Qoysaska qaar ayaa door-biday in ay cabbaan biyaha ku haray Warta oo is bedal ka muuqdo. Deegaannada Jubbaland ee Abaartu ku saameysay qoysaska Xoolo dhaqatada ah waxaa intaas u dheer colaad ka taagan Degmooyinka qaar, taasi waxa ay sii cakirtay dhaqdhaqaaqa dadka u sahan-taga qoysaska si ay usoo hubiyaan hoobaha ay saldhigayaan.